हाइड्रा फेसियल के हो, कसरी गरिन्छ? :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
हाइड्रा फेसियल के हो, कसरी गरिन्छ?
कमला गुरुङ शुक्रबार, भदौ १८, २०७८, ०६:३७:००
काठमाडौं - अनुहारको छालामा चमक ल्याउन र सुन्दर बनाउन गरिने विभिन्न उपायमध्ये एक हो, फेसियल।
विशेषगरी फेसियल ब्यूटी पार्लरमा गरिन्छ। तर छालाको प्रकार र समस्या अनुसार पनि स्किन क्लिनीकमा फेसियल गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय हाइड्रा फेसियल धेरै महिलाको रोजाईमा पर्छ।
प्रविधिको माध्यमबाट अनुहारको छालामा रहेको फोहोर तथा मृत छालालाई निकाली चमक ल्याउन हाइड्रा फेसियल गर्न सकिन्छ। छालाको प्रकार र समस्या अनुहार हाइड्रा फेसियल गर्न मिल्नु नै यसको विशेषता हो।
हाइ्रडा फेसियल के हो? कसरी गरिन्छ? छालालाई यसले गर्ने फाइदाहरु के के छन् लगायत विषयमा हामीले छाला रोग विशेषज्ञ प्रा.डा सबिना भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौँ। डा भट्टराईसँग गरिएको भिडियो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
हाइड्रा फेसियल भनेको के हो ?
- यो एक अनुहारमा गरिने नयाँ प्रविधिको फेसियल हो।
- अनुहारमा रहेको फोहोर तथा मृत छालालाई निकाल्ने र अक्सिजन दिइन्छ।
- एउटा पेनको माध्यमबाट छालाभित्र मोइस्चराइजर वा सेरम पठाइन्छ।
ब्यूटि पार्लर गर्ने फेसियल र स्कीन क्लिनीकमा गरिने हाइड्रा फेसियलमा फरक के छ ?
- छालामा यसले गर्ने काममा धेरै फरक पर्छ।
- व्यक्तिको छाला र रोग अनुसार हाइड्रा फेसियल गर्न मिल्छ।
- हाइड्रा फेसियल छाला रोग विशेषज्ञहरुले गर्छन्।
हाइड्रा फेसियल कसले गर्न मिल्छ र कसले गर्न मिल्दैन ?
- हाइड्रा फेसियल सबैले गर्न मिल्छ। तर गर्भवती महिलाहरुलाई नगर्न हामी सुझाव दिन्छौ।
- संवेदनशील र डण्डीफोरको गम्भीरको खालको समस्या भएकाले गर्न मिल्दैन।
हाइड्रा फेसियल गरिसकेपछि पनि छालाको विशेष हेरचाह गर्नुपर्छ ?
- छालाको प्रकार अनुसार यसमा नदेखिने प्वाल बनाएर औषधिहरु पनि पठाउन सकिन्छ।
- हाइड्रा फेसियल महिनामा एक पटक गर्न सकिन्छ।
- तर कसैको छालामा धेरै नै समस्या छ भने दुई हप्ताको फरकमा पनि गर्न सकिन्छ।
हाइड्रा फेसियल गरेको कति समयपछि अनुसार यसको नतिजा देखिन थाल्छ ?
- अनुहारमा चमल ल्याउन गरिएको हाइड्रा फेसियल हो भने तुरुन्तै प्रभाव देखिन्छ।
- चाउरीपन, पोर्सहरु, कालो दाग धब्बा हटाउन गरिएको हो भने तीनदेखि चार पटक गरेपछि प्रभाव देखिन थाल्छ।
हाइड्रा फेसियलले छालामा कुनै असर गर्छ/गर्दैन ?
- छालाको समस्या हेरेर हाइड्रा फेसियल गरिने भएकाले असर गर्दैन।
- यदी पिलिङ गरिएको छ भने सिधै घामको सम्पर्कमा जानु हुँदैन।
- हाइड्रा फेसियल गरिसकेपछि उहाँहरुको छाला अनुसार हेरचाहका लागि हामी सुझाव दिने गर्छौ।
हाइड्रा फेसियल गर्नुअघि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
- हाइड्रा फेसियल एउटा नयाँ प्रविधि भएकाले यसले छालालाई राम्रो गर्छ।
- धूवाँ-धूलो र प्रदूषणले छालालाई धेरै असर गर्छ। ती असरबाट जोगाउन हाइड्रा फेसियल गर्दा राम्रो हुन्छ।
डिप्रेसनको उपचार सम्भव छ: करुणा कुँवर [भिडियो] मनोविद करुणा कुँवरसँग हामीले डिप्रेसन के हो ? किन हुन्छ र कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थप कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको भिडियो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः १० घण्टा पहिले